Ihe niile ndị na-ere ahịa kwesịrị ịma banyere ego na usoro aghụghọ | Martech Zone
Chaị - ozugbo m hụrụ infographic a Akwụkwọ ego, na-eduga UK ndepụta ego na ego saịtị, Amaara m na m ga-eso ya! Ihe omuma ihe omuma bu ihe nlere anya na ego ndi ozo, usoro ego ego, kaadị iguzosi ike n'ihe na ahia ahia kacha mma maka ndi na ere ahia. Ọ na-enye profaịlụ nke onye ọrụ dere, atụmatụ na aghụghọ maka ịkwalite mkpọsa gị, yana ọtụtụ ihe atụ sitere na ndị na-ere ahịa na-eduga.
Ihe kacha masị m bụ ọnụego a (edezigharị ya):
Ọtụtụ ụlọ ọrụ anaghị enweta uru nke Kupọns site n'inye nkwalite nke na-emebi uru ha, na-ada n'ahịa ha ma na-atụle ngwaahịa ha n'ihi mkpọsa oge niile na-agba ọsọ ọsọ ọsọ ma ọ bụ site na ịbelata oke ọnụahịa dị elu. Ndị ọzọ anaghị akwalite mkpọsa ha nke ọma ma nwee ike izipu otu mmelite site na ọwa mgbasa ozi na mgbasa ozi iji kwalite nkwalite ha, na azụmaahịa ha ma na-atụ anya nsonaazụ.
Anyị ahụla Kupọns na-arụ ọrụ nke ọma na iweta ndị ọbịa ọhụrụ na ụlọ ahịa mkpọsa, mana anyị ahụkwala mbenata oke ọnụ ahịa na-emebi ọrụ enyere ebe ndị ahịa anaghị amata uru ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ha na-azụ. A ghaghị ịtụle ezigbo ego ka o wee merie azụmahịa ọhụrụ ma debe azụmahịa ahụ!
Tags: 241ngwaafọ dị iche ichen'uweomume kacha mmankwụsịbogofuru uruire ahia ahiazụta otu nweta otu n'efudere uruomume kacha mmacoupon mmetụtamgbapụta mgbapụtacoupon aghụghọụdị coupondere ọrụprofaịlụ couponKupọnsbepụ Kupọnsisi egoegongwá electronicozi nkwalite emailoge iziziizizi asịwo enyembupu n'efuikpe n'efufree ikpe na-enyeonyinye na nziakụkọ ihe mere eme nke KupọnsntinyeKupọns ịntanetịkaadị loytaltyMcDonaldoromausoro mmemmeKoodu QRiheọnụahịa mkpọsaNkwado ire ahịana-egosiKupọns mgbasa ozi mmekọrịtanchịkọta stampụstampụabụọ maka otuabụọ maka ụgwọ nke atọKoodu ego
Jenụwarị 10, 2016 na 9:22 PM
Ihe omuma ihe omuma mara nma. Anyị ga-enwe mmasị ịkekọrịta nke a na ndị ọrụ anyị (yana kredit gị).
Ọkt 3, 2016 na 4:04 PM
Nnukwu ọgụgụ na ozi! Naanị m chọrọ ịma ma ọ bụrụ na ị nwere njikọ ma ọ bụ nwee ike ịkekọrịta saịtị nke na-enye ndepụta nke ajụjụ ma ọ bụ ndepụta tupu m ahọrọ ụlọ mkpocha coupon? Adị m ọhụrụ na usoro a ma chọọ ndụmọdụ site na echiche ruo na mmecha.